July 11, 2019 - POPPIN NEW
မရဲ့ အသည်းကို ရက်ရက်စက်စက်ခွဲသွားတဲ့ မောင်ရဲ့ အကြောင်းကို သီဆိုထားတဲ့ ရတနာမိုင်ရဲ့ ရင်နာနာနဲ့မေးမယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်
Pop Pin New July 11, 2019
မရဲ့ အသည်းကို ရက်ရက်စက်စက်ခွဲသွားတဲ့ မောင်ရဲ့ အကြောင်းကို သီဆိုထားတဲ့ ရတနာမိုင်ရဲ့ ရင်နာနာနဲ့မေးမယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ် အနုပညာလောကထဲမှာ အလွမ်းသင့်ပန်းချီ သီချင်းလေးနဲ့စပြီး ပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုရရှိလာတဲ့ ရတနာမိုင် ဟာ အချစ်သီချင်းချိုချိုလေးတွေနဲ့ နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ သီချင်းလေးတွေဟာလဲ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေခဲ့သလို မကြာခင်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ လိုရာသုံးသီချင်းဟာလဲ ပရိသတ်တွေ အလွန်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ရတနာမိုင်ကတော့ …
သမီး​လေးဗစ်​တိုရီးယားအ​တွက်​ သီးသန့်​ထားရှိတဲ့ အလှူ​ငွေဘဏ်​အ​ကောင့်​ အပိတ်​​ခံလိုက်​​​ရတဲ့ကိစ္စရှင်းတမ်း
သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီယား​လေးရဲ့အမှုမှာ အမှုမှန်​​ပေါ်​ပေါက်​​ရေးအတွက်​ ဝန်းရံပါဝင်​​ဆောင်​ရွက်​သူ​တွေ၊ အလှူရှင်​​တွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းမှုနဲ့ အလှူ​ငွေလက်​ခံထားရှိတဲ့ သမီး​လေးဗစ်​တိုရီးယားကိုကူညီရန်​ သီးသန့်​ပြုလုပ်​ထားတဲ့ အလှူ​ငွေအ​ကောင့်​တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ ဧရာဝတီ AYA ဘဏ့်​အ​ကောင့်​ဟာ ဗဟိုဘဏ်​ကညွှန်​ကြားချက်​နဲ့ ဒီ​နေ့မနက်​မှာ ယာယီဆိုင်းငံ့ ပိတ်​ခံထားလိုက်​ရတယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ ကိုသက္ကမိုးညိုက ဘဏ်​ကို​မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်​ရာမှာ​တော့ “​ငွေ​ကြေးဆိုင်​ရာ စုံစမ်း​ထောက်​လှမ်း​ရေးအဖွဲ့” ​က အ​ကောင့်​လှမ်းပိတ်​ခိုင်းလို့ ပိတ်​ထားရ​လိုက်​ခြင်းဖြစ်​​ကြောင်း AYA ဘဏ်​က အ​ကြောင်းပြန်​လာခဲ့တယ်​လို့ သမီး​လေးဗစ်​တိုးရီးယားအမှုအတွက်​ …
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ ကံဇာတာအညံ့များလည်း ပပျောက်ပြီး ကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အလုပ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေကြပါစေ ( ဇူလိုင် 11 မှ 17 အထိ )။ တနင်္ဂနွေသမီးများ ဒီကာလအတွင်း အလုပ်တွေကို ကောင်းစွာ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် အချိန်တိုအတွင်း မိမိလုပ်ချင် တာတွေပြီးဆုံးအောင် လုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ် …
အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နေတဲ့ မြန်မာမိသားစုရဲ့ ၀မ်းနည်းစရာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ နှင့် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ လေးစားဖွယ် လုပ်ရပ်
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲဆိုင်မြို့လမ်းမပေါ်မှာ ရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကလေး (အောက်ဆီဂျင်ဗူးတတ်ထားရ)ကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ပြီး ဆေးရုံကနေ ပြန်လာနေတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးပုံ ဟာ အွန်လိုင်းမှာ ပြန့် နေခဲ့ပါတယ် ဒီကနေ့ တော့ မယ်ဆိုင် မြို့ ပိုင်ကိုယ်တိုင် သူနာပြုယာဉ်တွေနဲ့ အတူ ကလေးရှိတဲ့နေရာကို လိုက်ရှာပြီး ဆေးရုံပြန် တင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတာ …
စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်ပြီး ဒေါသကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်သူကိုအောင်မြင်စေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိ…
စိတ်တိုစိတ်ဆတ်တာ၊ ဒေါသကြီးတာတွေဟာ ကောင်းတဲ့ အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်မှာတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးတွေရှိနေပြန်ပါတယ်။ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်ပြီး ဒေါသကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်သူကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသတဲ့။ ဒီစမ်းသပ်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်တာကတော့ Michigan State University နဲ့ the University of Chicago က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေပါ။ ဒေါသကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ …
Victoria အမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ နမ့်စန်မြို့ က ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာယခုလက်ရှိအချိန်တွင် တရားခံအောင်ကြီးအား တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲကာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသို့ တရားစွဲ ဆို ထားမှု အ ပေါ် နမ့်စန်မြို့ ကကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦး ကောင်းမြတ်သူက ယနေ့ မှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ ငွေမရှိတဲ့သူတွေကို ထောင်ထဲပို့တာလား။” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေကတော့အမှုအခင်းဖြစ်ရင် ခင်ဗျားတို့ကို အကူအညီတောင်းဖို့နေနေသာသာ ခင်ဗျားတို့ သိမှာတောင် …
Victoria လေးအမှုမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ္တိရှိရှိ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ 😱😱
ယမန်နေ့ ညက ရဲဇာနည် Page ကနေ ဦးသက္ကမိုးညို နဲ့ မပိုးဖြူတို့ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းဖုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်း ထုတ်ပြန် ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမှု ကွန်ရက် အသုံးပြု သူတွေက ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တုန့်ပြန် ခဲ့ကြ တာပါ။ ဒီလိုပြောဆို ဝေဖန်သူတွေ …
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးပွဲကြမ်းပြီ!!!! Wisdom Hill ကျောင်းကိုပါ အစိုးရက အရေးယူမယ်။ မူကြို ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရဖို့ မလွယ်တော့ဘူး၊ သူပိုင်တဲ့ တခြား မူ၊ လယ်၊ ထက် ကျောင်းတွေကိုလည်း ပြန်စိစစ်ဖို့ သမ္မတက ပညာရေး ဝန်ကြီးကို ညွှန်ကြားလိုက်ပြီ။ ကလေးအမှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကျောင်းပိုင်ရှင်တွေကို BLack List လုပ်ဖို့ …
အရှေ့အရပ်နဲ့ တောင်အရပ်ကိုသာ ခေါင်းပြု အိပ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း
အရှေ့အရပ်နဲ့ တောင်အရပ်ကိုသာ ခေါင်းပြု အိပ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း ဘာကြောင့် အ ရှေ့အရပ်နဲ့ တောင်အရပ်ကို ခေါင်းပြုပြီး အိပ်သင့်တာလဲ? ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က အရှေ့ဘက်နဲ့ တောင်ဘက်ကို ခေါင်းပြုပြီး အိပ်ရ တာ ကို ဘာသာရေး အရ ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အရ အိပ်ရတယ် လို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ် ။ တကယ်တော့ အရှေ့ရပ် …
ထိုင်းတွင် အရက်မူးပြီးအိပ်နေသော မြန်မာတစ်ဦး ကားကြိတ်ခံရကာ သေဆုံး (ရုပ်သံ)
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် ကိုကျော်သန်း မှာ အရက်မူးလွန်ပြီး ခြံတစ်ခြံ၏ရှေ့တွင် အိပ်ပျော်နေခဲ့ရာမှ ကားကြိတ်ခံခဲ့ရပြီး နေရာတင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ထိုင်းသတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့က ကိုကျော်သန်း မှာ အရက်အလွန်အကျွံမူးနေပြီး ဘန်ကောက်မြို့ ကမ်နယို မြို့နယ်ရှိ နေအိမ်ခြံတစ်ခြံ၏ ကားထားရန်နေရာဟု ယူဆရသော …